एका बिहानै आयो दुखद खबर : चिसापानी पुलबाट तीन विद्यार्थीले एकैपटक हामफाले ! - समृद्ध नेपाल
कैलालीको कर्णाली चिसापानी पुलबाट एक युवक बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको लम्किचुहा नगरपालिका–२ का १८ वर्षिय सञ्जय खड्का कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। उनले शनिबार दिउँसो कर्णाली पुलबाट हामफालेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार १८ वर्षीय लोकेश प्याकुरेल घाइते भएका छन्। लम्किचुहा१ का प्याकुरेललाई नेपालगञ्ज उपचारका लागि लगिएको छ।
उनको छातीमा चोट लागेको छ। उनीहरुसँगै नदीमा हाम फालेका १७ वर्षीय वीरेन्द्र सिंहको अवस्था भने सामान्य छ।उनीहरु सबै एकै विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थी हुन्। उनीहरू शनिबारआज ८जनाको समूहमा चिसापानी गएका प्रहरीले बताएको छ। चिसापानीको पुलमा टिकटक बनाउनेको भीड दैनिक भीड लाग्ने गर्छ। तर उनीहरुले भिडियो नबनाएका प्रहरीले बताएको छ। उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यो पानि हुम्लाका लागि सात हजार क्विन्टल चामल स्वीकृतसरकारले हुम्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत सात हजार क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति हुम्लाले माग गरेअनुसार उक्त कोटा स्वीकृत गरिएको लिमिटेड हुम्ला शाखाका नायब सुब्बा भरत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
रन्जना मैनालीको सपोर्ट गर्दा गोपाल लाई हात हाले पुण्य गौतमले !
‘संविधानले तोकेभन्दा बढी अधिकार ओलीलाई छैन’
दीपा श्री निरौला महानायक विवादपछि पहिलो पटक रुँदै मिडियामा !
शिशिर भण्डारीलाई गीत चोरेको आरोप लाग्यो । शिशिरले दुखी हुँदै स्पष्टिकरण दिए !
गौरिका भन्छिन्- ‘कोरोना संक्रमित मेरा पिता निको हुनुभयो’ !
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा जिओफिजिकल सर्भे सकियो !
प्रहरी चौकीमा गोली काण्ड !